DAAWO: ”War Ilhaan Cumarba ma cabsane maxaad u cabsanaysaan?!” – Weriye Carbeed oo caan ah oo ceebeeyay madaxda Carbeed!! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: ”War Ilhaan Cumarba ma cabsane maxaad u cabsanaysaan?!” – Weriye Carbeed...
DAAWO: ”War Ilhaan Cumarba ma cabsane maxaad u cabsanaysaan?!” – Weriye Carbeed oo caan ah oo ceebeeyay madaxda Carbeed!!
(London) 10 Maarso 2019 – Weriyaha Falastiiniga ah ee Cabdul Baari Cudwaan oo ah ruug caddaa saxaafadeed oo aad looga yaqaanno dunida Carbeed ahna tifaftiraha warqaadka Sharq-al-Awsad, ayaa amaan kala dul dhacay Ilhaan Cumar, isagoo wejiga ka gubey madaxda Carbeed.
Weriyaha ayaa sheegay in Ilhaan oo gabar Soomaaliyeed ihi ay foolka ku diireeyso hay’aadka qalqaalada ee ugu waawayn caalamka (AIPAC), taasoo uu sheegay in ay ku dhiirran waayeen madaxda Carabtu.
”Waxay ka hadashay dembiyada ay Israel ka geleeyso shacbiga Falastiin iyo dhulalka la haysto iyo cunsuriyadda Israel, mana ka cabsanayso ololayaasha lagu qaaday, waa sidii aan ka rajanayay hoggaamiyayaasha Carabta.” ayuu yiri Cudwaan.
”Waase naadir!” ayuu raaciyay isagoo warkiisa sii wata. ”Inaad aragto hoggaamiye Carbeed oo ka hadlaya Falastiin, ka hadlaya gumaysigooda, ka hadlaya dembiyada gumaysigooda, Ma jiro Wasiir Dibadeed Carbeed oo ka hadlaya arrintaas. War iyaduba ma baqaysee maxaad ka baqaysaan?” ayuu ku qayliyay isagoo qiiraysan.
Ilhaan Cumar oo ku cusub Koongarayska Maraykanka ayaa dood ka oogtey Maraykanka, iyadoo kasbatay shacab badan oo Maraykanka ah oo ku raacsan doodaha ay u istaagtey oo awal cod la’aan ahaa, halka kuwo badan oo muxaafid ihi ay ku mucaarideen.
Waxaana markii ugu horreeysey taariikhda Koongarayska Maraykanka laga soo saaray qaraar cambaaraynaya Islaam-nacaybka, taasoo ay iyadu sabab u noqotay.
Halkan hoose ka daawo….Dhegeyso
Previous article”Dayuurad ha raacin 6-da Abriil!” – Halis caalami ah oo laga digey!
Next articleImaaraadka iyo Sucuudiga oo Hindiya uga hiilliyey Pakistan! (Tillaabo la yaab leh oo ay qaadeen)